Imigaqo neMeko- iFunlandia
Inkqubo yeFunlandia Play Inc.
Le migaqo nemiqathango ichaza imigaqo kunye nemigaqo yokusetyenziswa kwewebhusayithi yeFunlandia.com, ekwi-www.funlandia.com.
Ngokungena kule webhusayithi, sicinga ukuba uyayamkela le migaqo nemiqathango. Sukuqhubeka nokusebenzisa ifandlandia.com ukuba awuvumi ukuthatha yonke imigaqo kunye neemeko ezikweli phepha.
Esi sigama silandelayo siyasebenza kule migaqo nemiqathango, iSiteyitimenti sabucala kunye neSaziso sokuSikhipha kwiNgcaciso nazo zonke iziVumelwano: "UmThengi", "wena" kunye no "wakho" kubhekiswa kuwe, umntu obhalisa kule ndawo kwaye uyavumelana nemigaqo yeNkampani. "Inkampani", "Siya", "Us", "Yethu" kunye "Nathi", ibhekisa kwiNkampani yethu. "Ipati", "Amaqela" okanye "Nathi", kubhekiswa kubo bobabini abathengi nakuthi. Yonke imiqathango ibhekisa kunikezelo, ukwamkelwa, kunye nokuqwalaselwa kwentlawulo eyimfuneko ukuze kwenziwe inkqubo yoncedo lwethu kuMthengi ngeyona ndlela ifanelekileyo ngenjongo ebonakalayo yokuhlangabezana neemfuno zomThengi ngokunxulumene nokunikezelwa kweenkonzo ezichaziweyo zeNkampani, ngokungqinelana nokuxhomekeke kumthetho osebenzayo wase-Netherlands. Nakuphi na ukusetyenziswa kwesi sigama singentla okanye amanye amagama kwisinye, kwisininzi, koonobumba abakhulu, kunye / okanye yena, kuyaqondwa ukuba kuyatshintshiswana ngako oko kubhekisa kwinto enye.
Sisebenzisa ukusetyenziswa kweicookies. Ngokungena kwi-funlandia.com, uyavuma ukusetyenziswa kweicookies ngokungqinelana noMgaqo-nkqubo wabucala wefandlandia.com.
Uninzi lweewebhusayithi ezisebenzisanayo zisebenzisa ii-cookies ukufumana idatha yomsebenzisi kutyelelo ngalunye. Iicookies zisetyenziswa yiwebhusayithi yethu ukwenza ukuba ukusebenza kweendawo ezithile kube lula kubatyeleli kwiwebhusayithi yethu. Amanye amahlakani / amaqabane ethu entengiso nawo anokusebenzisa ii-cookies.
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, i-fandlandia.com kunye / okanye abanini-layisenisi bayo banamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda yazo zonke izinto ezikule funlandia.com. Onke amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda agciniwe. Ungafikelela kwezi funlandia.com ngokuzisebenzisa ngokwakho, ngokuxhomekeke kuthintelo kule miqathango kunye neemeko.
1.papasha izinto ezivela kuflandlandia.com
2.sell, rent okanye izinto ze-sublicense ezivela funlandia.com
3.Ukuvelisa kwakhona, ukuphinda kabini okanye ukukopa izinto ezivela ku-fandlandia.com
4.sasaza kwakhona umxholo kwiiflandlandia.com.
Esi sivumelwano siqala ngomhla wesi sivumelwano. Imigaqo kunye neemeko zethu zenziwe kusetyenziswa umvelisi weT & C.
Iinxalenye zale ndawo zibonelela abasebenzisi ngokubanakho ukuthumela kunye nokwabelana ngezimvo kunye nolwazi kwiindawo ezithile zesiza. I-funlandia.com ayicoci, ayilungisi, ayipapashi okanye iphonononge izimvo phambi kobukho bayo kwiwebhusayithi. Izimvo azibonisi izimvo kunye nezimvo ze-landlandia.com, iiarhente zayo, kunye / okanye abaxhasi. Amagqabantshintshi abonisa izimvo kunye nezimvo zomntu othumela izimvo kunye nezimvo zakhe. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, iFunlandia.com ayizukubekwa tyala kwiiNkcazo okanye ngalo naluphi na uxanduva, umonakalo, okanye iindleko ezibangelwe kunye / okanye ukubandezeleka ngenxa yako nakuphi na ukusetyenziswa kunye / okanye ukuthumela kunye / okanye ukubonakala kwe Izimvo kule Webhusayithi.
I-funlandia.com inelungelo lokubeka iliso kuwo onke amaNqaku kunye nokususa naziphi na iiNkcazo ezithathwa njengezingalunganga, ezihlaselayo, okanye ezibangela ukuphulwa kwale migaqo neemeko.
Uqinisekisa kwaye umele oko:
1. ugunyazisiwe ukuba upose iikhomenti kwiwebhusayithi yethu kwaye unazo zonke iilayisensi eziyimfuneko kunye nemvume yokwenza njalo;
2. Amagqabantshintshi awaphuli amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kulo naliphi na ilungelo lobunikazi, kwilungelo elilodwa lomenzi wechiza, okanye uphawu lwentengiso lwalo naliphi na iqela lesithathu;
Ii-3.comments aziyi kuba nezinto ezingcolisayo, ezinyelisayo, ezikhubekisayo, ezingenasidima okanye ezinye izinto ezingekho mthethweni ezibandakanya ukuhlaselwa kwemfihlo;
4. Amagqabantshintshi awasayi kusetyenziswa ukucela ishishini okanye isiko okanye ukubonisa imisebenzi yorhwebo okanye isenzo esingekho mthethweni.
Ngokwenjenje unika ifandlandia.com ilayisensi engakhethiyo yokusebenzisa, ukuvelisa kwakhona, ukuhlela nokugunyazisa abanye ukuba basebenzise, ​​bavelise kwakhona kwaye bahlele naziphi na iiNkcazo zakho nangazo naziphi na iindlela, iifomathi, okanye imithombo yeendaba.
Ukudibanisa umxholo wethu
Le mibutho ilandelayo inokuqhagamshela kwiwebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume ebhaliweyo kwangaphambili:
1 iiarhente zikarhulumente;
Abasasazi beencwadi ezikwi-intanethi banokunxibelelana newebhusayithi yethu ngendlela efanayo nokunxibelelana neewebhusayithi zamanye amaziko adwelisiweyo; kunye ne-5.
Le mibutho inokuqhagamshela kwiphepha lethu lasekhaya, upapasho, okanye olunye ulwazi lwewebhusayithi ukuba nje ikhonkco: (a) alilahlekisi nangayiphi na indlela; (b) ayithethi ngobuxoki inkxaso-mali, ukuxhasa, okanye ukuvuma kweqela elidibanayo kunye neemveliso kunye / okanye iinkonzo; kwaye (c) ingena ngaphakathi kwimeko yewebhusayithi edibeneyo.
Singaqwalasela kwaye samkele ezinye izicelo zekhonkco kwezi ntlobo zilandelayo zemibutho:
1. Imithombo yabathengi eyaziwa kunye / okanye imithombo yolwazi yeshishini;
2.dot.com iisayithi zoluntu;
Imibutho okanye amanye amaqela amele imibutho yesisa;
Iisayithi zolawulo ezikwi-intanethi;
Iindawo zokungena kwi-Intanethi;
5.iifektri zokubala, ezisemthethweni, nezokubonisana; kunye 6. namaziko emfundo nemibutho yezorhwebo.
Siza kuvuma izicelo zonxibelelwano ezivela kule mibutho ukuba siyafumanisa ukuba: (a) ikhonkco alinakusibangela ukuba sibonise thina okanye iinkampani zethu ezivunyiweyo ngendlela engeyiyo; (b) umbutho awunanto irekhodi kuthi; (c) isibonelelo esiya kuthi ngokubonakala kwehyperlink sisusa ukungabikho kwefunlandia.com, kwaye (d) ikhonkco linxulumene nolwazi ngokubanzi lwezixhobo.
Le mibutho inokunxibelelana nephepha lethu lasekhaya ukuba nje ikhonkco: (a) alilahlekisi nangayiphi na indlela; (b) ayithethi ngobuxoki inkxaso-mali, ukuxhasa, okanye ukuvunywa kweqela elidibanayo kunye neemveliso okanye iinkonzo zalo; kwaye (c) ingena ngaphakathi kwimeko yewebhusayithi edibeneyo.
Ukuba ungomnye wemibutho edweliswe kumhlathi 2 apha ngasentla kwaye unomdla wokuqhagamshela kwiwebhusayithi yethu, kuya kufuneka usazise ngokuthumela i-imeyile ku-funlandia.com. Nceda ufake igama lakho, igama lombutho wakho, ulwazi loqhakamshelwano, kunye ne-URL yewebhusayithi yakho, uluhlu lwazo zonke ii-URL ojolise kuzo ukunxibelelana newebhusayithi yethu, kunye noluhlu lwee-URL kwiwebhusayithi yethu ojonge ukudibanisa kuyo . Lindela impendulo kwiiveki ezi-2-3.
Imibutho evunyiweyo inokunxibelelana newebhusayithi yethu ngolu hlobo lulandelayo:
1 ngokusebenzisa igama lenkampani yethu;
2. ngokusebenzisa i-Uniform Resource Locator enxulunyaniswa nayo;
3. ngokusebenzisa enye inkcazo yewebhusayithi yethu inxibelelene nengqiqo kwimeko kunye nefomathi yomxholo kwiwebhusayithi yeqela elidibanisa.
Akukho kusetyenziselwa ilogo ye funlandia.com okanye omnye umsebenzi wobugcisa oya kuvunyelwa ukunxibelelana ngaphandle kwesivumelwano selayisensi yophawu.
Awunakho ukwenza izakhelo ezijikeleze amaphepha ewebhu athi nangayiphi na indlela atshintshe umboniso okanye ukubonakala kwewebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume yangaphambili kunye nemvume ebhaliweyo.
Asinaxanduva lwalo naluphi na umxholo ovela kwiwebhusayithi yakho. Uyavuma ukusikhusela kwaye usikhusele kuwo nawaphi na amabango avelayo kwiwebhusayithi yakho. Akukho makhonkco anokuvela kwiwebhusayithi anokuchazwa njenganyelisa, amanyala, okanye ulwaphulo-mthetho, okanye ukwaphula umthetho, kungenjalo waphula umthetho okanye ukhuthaze ulwaphulo-mthetho okanye olunye ulwaphulo-mthetho lwamalungelo eqela lesithathu.
Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wabucala
Sinelungelo lokukucela ukuba ususe naziphi na amakhonkco okanye ikhonkco elithile kwiwebhusayithi yethu. Uyavuma ukususa onke amakhonkco kwiwebhusayithi yethu kwangoko xa uceliwe. Sigcina nelungelo lokutshintsha le Migaqo kunye noMgaqo-nkqubo Wonxibelelwano nangaliphi na ixesha. Ngokuqhubeka nokunxibelelana newebhusayithi yethu, uyavuma ukuba ubotshelelwe kwaye uthobele le migaqo yokudibanisa.
Ukususwa kwamakhonkco kwiwebhusayithi yethu
Ukuba ufumana ikhonkco kwiwebhusayithi yethu engathandekiyo nangasiphi na isizathu, ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha kwaye usazise. Siza kuqwalasela izicelo zokususa amakhonkco kodwa akanyanzelekanga ukuba enze njalo okanye aphendule ngqo.
Asiqinisekisi ukuba ulwazi olukule webhusayithi luchanekile, asiqinisekisi ukuba luzalisekile okanye luchanekile; kwaye asithembisi ukuba iwebhusayithi iya kuhlala ifumaneka okanye ukuba izinto ezikule webhusayithi ziya kugcinwa zisemgangathweni.
Ukuya kuthi ga ngokuvunyelweyo ngokomthetho osebenzayo, siyazichasa zonke izinto ezivakalisiweyo, iziqinisekiso, kunye neemeko ngokubhekisele kwiwebhusayithi yethu kunye nokusetyenziswa kwale webhusayithi. Akukho nto kwesi sikhululo iya kuthi:
1.Phelisa okanye ungabandakanyi uxanduva lwethu lokufa okanye lokulimala;
2.Ukunciphisa okanye ukukhuphela ngaphandle kwakho okanye uxanduva lwakho ngobuqhetseba okanye ubuqhetseba;
3. Nciphisa uxanduva lwethu okanye uxanduva lwakho ngendlela engavunyelwanga ngumthetho osebenzayo, okanye ngaphandle kweyethu okanye ityala lakho elingenakukhutshwa phantsi komthetho osebenzayo.
Izithintelo kunye nezithintelo zamatyala ezichazwe kweli candelo nakwezinye iindawo kwesi sikhululo: (a) zixhomekeke kumhlathi ongaphambili; kwaye (b) alawule onke amatyala avela kwi-disclaimer, kubandakanywa namatyala kwisivumelwano, ukungcungcuthekisa kunye nokwaphula uxanduva ngokomthetho.
Ngethuba nje iWebhusayithi kunye nolwazi kunye neenkonzo kwiWebhusayithi zinikezelwa simahla, asizukubekwa tyala ngayo nayiphi na ilahleko okanye ukonakala kwalo naluphi na uhlobo.